Global Voices teny Malagasy » Fahatsiarovana an’i Aimé Césaire · Global Voices teny Malagasy » Print
Fahatsiarovana an'i Aimé Césaire
Voadika ny 22 Mey 2021 4:22 GMT 1	 · Mpanoratra Jennifer Brea Nandika (fr) i Claire Ulrich, Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Karaiba, Martinika, Fiteny, Foko sy Fiaviana, Haisoratra, Hevitra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara
Sary avy amin'ny mpisera Flickr Caboindex 
nampiasana lisansa Creative Commons
Maty tamin'ny 17 aprily 2008 teo amin'ny faha-94 taonany i Aimé Césaire, poeta, Martinikey, mpanao politika ary Karaibeana mafana fo. Matetika tsy dia mahay miaraka firy loatra ny politika sy ny tononkalo kanefa manome tany lonaka roa ho azy ireo i Karaiba  rehefa mitranga izany. Nampifangaro ny fitiavany ny fiteny, ny hevitra ary ny fanoratana tao amin'ny fiainany politika, izay naharitra efa ho enimpolo taona i Aimé Césaire.
Tahaka ireo manam-pahaizana Karaibeana maro tamin'ny androny dia liana tamin'ny famerenana ny famaritana ny mombamomba ny mari-panindroana mainty hoditra  ao aminy sy ny an'ireo rahalahiny manoloana ny fiheveran-dison'ny fanjanahan-tany izy. Nahasarika azy ny Firaisana Sovietika ho maodely hafa amin'ny fandrosoan'ny olombelona. Toa nandiso fanantenana azy kaomonisma saingy nijanona ho hentitra tamin'ny fanoherana ny fanjanahan-tany  izy.
Amin'izao fotoana, manome voninahitra azy ny taranaka vaovao Karaibeana, izay manolotra ny fahalalahany tamin'ny fiantraikan'ny asa-sorany sy ny fahombiazany ara-politika.
Bilaogera maro no nanome voninahitra azy tamin'ny ohabolana na sombiny avy amin'ny sanganasany. Tany Martinika, namoaka sombiny avy amin'ny Cahier d'un retour au pays natal  ny le blog de [moi] . Tao Trinité, nanonona andalana iray tamin'ny tononkalo Mémorandum de ma Martinique i Nicholas Laughlin  raha tany Antilles kosa dia namoaka sombiny iray avy amin'ny Lost Body ny bilaogin'ny The Caribbean Review of Books.
Nanoratra i Cap 21 Outre-Mer  fa i Césaire no “olomangan'ny vahoaka iray manontolo tamin'ny fikatsahany hamantatra mari-panondroana azy taorian'ny fanjanahantany izay tsy ho fahatsiarovana fotsiny ihany ho an'ny tononkalony, fa ho an'ny fanoloran-tenany ara-politika ihany koa.
Ankoatra ny fanoloran-tenany ara-literatiora sy ara-kolontsaina, tiako ihany koa ny mankasitraka ny fanoloran-tenany mavitrika tamin'ny politika, izay, naha ben'ny tanàna azy tao Fort-de-France nandritra ny 56 taona. Aimé Césaire no ohatra ho an'ireo mpanao politika antillais iray manontolo, ohatra amin'ny mpanao politika izay nitondra tamin'ny fahalehibeazana hatrany, noho ny heviny, ho an'ny mpiray tanindrazana aminy, ho an'ny vahoakany ary ambonin'izany rehetra izany ho an'ny filamatra iraisana. Lehilahy miavaka nandao antsika izy ankehitriny; Frantsa, ny any ampielezana, mankasitraka azy isika rehetra.
Mazava ho azy fa tonga lavitra mihoatra ny tanindrazany Martinika sy ny Antilles ny lazan'i Césaire.
Nanoratra lahatsoratra maro  ho fanomezam-boninahitra an'i Césaire ilay bilaogera Senegaley Souleymane Dieye  ary nandefa ny sarin'ilay  poeta an-tserasera nandritra ny fitsidihany an'i Senegal.
Tao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Césaire ilay malalantsika ” i Souleymane Dieye nanoratra hoe “Lehilahy mahatalanjona ilay dada poeta. Be voninahitra Izy. Lehilahin'ny vahoaka namerina ny fahamendrehan'i Martinika… ”. Nanonona an'ilay mpanoratra sady filozofa Senegaley Hamidou Dia izy, izay nilaza tamin'ny fampitam-baovao fa “Aimé Césaire no namerina ny reharehantsika ho Afrikana”.
Tany Congo-Kinshasa, nanoratra i Forum Réalisance :
Ho an'ny rahalahiko maranitra indrindra, tompoko, ny feon'ny fieritreretako sy ny tolon'ny olombelona ataontsika tsy misy fiafarany; Tena malahelo fa tsy miaraka aminay intsony ianao! Ary manoloana ny sahan'ady atrehanay, malahelo sady irery izahay noho ny fahalasananao… Mandria am-piadanana, zanaka malala an'ny kaontinanta mandrakizay. Enga anie ny vavakay mampihetsim-po sy malefaka handrotsirotsy anao amin'ity dia mangina tsy misy fiverenana izay lalovanao ankehitriny ity. Tsy hanadinonay velively ianao, satria hijanona ho olo-marina manan-tantara ianao ao anatin'ny fitiavana lalim-pakan'ny vehivavy sy ny lehilahy manam-pinoana.
Samy nanome voninahitra azy ireo bilaogera Amerikana Pierre Joris  sy Matthew Cheney :
Au début de la semaine, au Togo, alors que la nouvelle de l'hospitalisation d'Aimé Césaire et de sa santé déclinante se répandait autour du monde, l'écrivain Kangi Alem se demandait comment il conviendrait d'honorer le grand homme . Kangi Alem ne soutient pas l'idée de certains hommes politiques français d'accueillir Césaire au Panthéon  (où reposeront peut-être d'autres hommes noirs célèbres .
Tany am-piandohan'ity herinandro ity tany Togo, nanontany tena ilay mpanoratra Kangi Alem raha niparitaka nanerana an'izao tontolo izao ny vaovao momba ny fampidirana hopitaly an'i Aimé Césaire sy ny faharatsian'ny fahasalamana, hoe ahoana no mety atao hanomezam-boninahitra ity lehilahy manana ny lazany ity. Tsy manohana ny hevitry ny mpanao politika Frantsay sasany i Kangi Alem amin'ny fanaterana an'i Cesaire any Panthéon  (toerana hilevenan'ny mainty hoditra malaza hafa .)
Marina fa ho faty izy, ilay poeta mpikomy, saingy mazava ho azy, amin'io taonany io, ny miroso amin'ny tsy fahafatesana sisa no tokony holalovan'ny poeta. Fa tsy any Pantheon, hevitra hafahafa izay foronon'ny sasany amin'izao fotoana izao, ary tsy ilaina ifandirana akory. Raha ny lazan'i Césaire, dia mifangarika amin'ny lazany izany karazana fankatoavana izany. Ho gaga ihany koa aho raha mora mahatsapa izany voninahitra izany ilay poeta. Aleo ajanona ny resabe momba ity poeta malaza izay tsy mbola lasana ity. Saingy ho faty izy, Cesaire, ary hankalazaintsika izy!
Nanohy i Kangi Alem:
Amin'ny fahafatesany, hanjavona ny endriky ny ray telo farany nananganana ny Négritude, hetsika literatiora sy ideolojika izay niely alavitra ary nanamarika antsika rehetra, mpanakanto sady mpanoratra Afrikana, amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa. Ahoana no fomba hisaorako sy hanaovako veloma ilay poeta Martinikey? Tao amin'ity bilaogy ity, nanome ahy hevitra i Timba. Ary raha samy manome antsika teny nalaina avy tamin'ny lahatsoratr'i Aimé Césaire nanamarika azy ny tsirairay avy ? Fomba iray hahatsiarovana azy sy hijerena indray ny lovany amin'ny teatira, poezia ary lahatsoratra amin'ny fombantsika manokana. Veloma, ry poeta, efa tsy mety maty na dia mandritra ny androm-piainanao aza. (K.A)
Nisafidy sombiny avy amin'ny Ny voina nahazo ny Mpanjaka Christophe  i Kangi Alem, tantara an-tsehatra nataon'i Césaire momba ny mpitarika revolisionera Haisiana izay nanambara ny tenany ho mpanjakan'i Haiti tamin'ny taona 1811 ary nanangana rafitra feodaly tao amin'ny firenena. Nilalao tamin'ity sanganasa ity tao amin'ny Fetiben'i Avignon i Kangi Alem.
Mbola miverina ao an-tsaiko, mahery vaika, miraikitra an-tsaina, tsy hay hadinoina ny tenin'i Mpanjaka Christophe, miresaka amin'ny vadiny sahiran-tsaina nahita azy mampijaly ny olony. Césaire lehibe, Césaire tsara, poeta tsy hay hadinoina na dia amin'ny fanoratany teatira aza.
Nanoratra i Racisme et Histoire: Le Tabou :
Nodimandry androany i Aimé Césaire. Manantena aho fa tsy ho voaloto na ho foanana ny lovany. Andriamatoa Césaire, mbola velona ato am-poko ny maha-Olombelona anao.
Nandefa sary miaraka amin'ny teny telo ny Caribbean Free Radio :
Veloma, Aimé Césaire.
Inona no hahatsiarovanao azy ?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/05/22/152650/
 Maty : http://news.google.fr/news?hl=fr&q=afp+aim%C3%A9+c%C3%A9saire&um=1&ie=UTF-8&sa=X&oi=news_result&resnum=1&ct=title
 tononkalo : http://www.poets.org/poet.php/prmPID/594
 mari-panindroana mainty hoditra: http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gritude
 hentitra tamin'ny fanoherana ny fanjanahan-tany: http://www.blogdemoi.com/2006/10/03/bienvenue-a-laeroport/
 Cahier d'un retour au pays natal: http://fr.wikipedia.org/wiki/Cahier_d
 le blog de [moi]: http://www.blogdemoi.com/2008/04/17/Aimé-Césaire-26-juin-1913-17-avril-2008/
 Nicholas Laughlin: http://nicholaslaughlin.blogspot.com/2008/04/at-our-limitless-command.html
 Cap 21 Outre-Mer: http://cap21-antilles.over-blog.com/article-18820342.html
 lahatsoratra maro: http://souleymanedieye.blogspot.com/2008/04/avec-cesaire-de-tout-coeur-de-tout_18.html
 Souleymane Dieye: http://souleymanedieye.blogspot.com/
 Césaire ilay malalantsika: http://souleymanedieye.blogspot.com/2008/04/notre-cesaire-aim.html
 Forum Réalisance: http://realisance.afrikblog.com/archives/2008/04/17/8857240.html
 Pierre Joris: http://pjoris.blogspot.com/2008/04/aim-csaire-1913-2008.html
 Matthew Cheney: http://mumpsimus.blogspot.com/2008/04/aim-csaire-1913-2008.html
 d'autres hommes noirs célèbres: http://www.congopage.com/article4613.html
 Mpanjaka Christophe: http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Christophe
 Racisme et Histoire: Le Tabou: http://colonisation.blogspot.com/2008/04/151-au-revoir-aim.html
 Caribbean Free Radio: http://www.caribbeanfreeradio.com/blog/2008/04/17/le-retour/